गरिबहरुलार्इ भारतले काम गरेर खान नदिनेभो भन्दा राजा बिरेन्द्र यसरी रोएका थिए ! - Muldhar Post
गरिबहरुलार्इ भारतले काम गरेर खान नदिनेभो भन्दा राजा बिरेन्द्र यसरी रोएका थिए !
युवराज गौतम २०७४, २९ कार्तिक बुधबार 918 पटक हेरिएको
नारायणहिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९) अत्यन्त पीडादायक घटना थियो । सो घटनामा मारिएका राजा वीरेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, राजा त्रिभुवनका नाति र राजा महेन्द्रका सुपुत्र मात्र थिएनन्, आफ्नो कालखण्डमा संसारमै अत्यन्त सम्मानित, विशिष्ट राजनेता (स्टेट्सम्यान) मध्ये एक थिए । अमेरिका, चीन, सोभियत संघ, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, भारतलगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गर्दा उनले पाएको ठूलो सम्मानले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो हुन्थ्यो ।
एउटा अल्पविकसित राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षले सुसम्पन्न र अति विकसित राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग संवाद गर्दा समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्छन् र त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं महाशक्तिहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ भन्ने कुरा राजा वीरेन्द्रले राम्रोसँग प्रमाणित गरेर देखाइदिए ।
फोहोर, अल्पआहार र सरुवा रोगले उसको शरीरमा आफ्ना चिन्हहरू छोडेका हुन्छन् । धेरैजसो ऊ गाउँहरूमा नै बस्छ । ती गाउँ विश्वको शेष भागबाट अलग्ग मात्र होइन, पुग्नै नसकिने हुन्छन् । सहरका फोहर बस्ती अथवा छाप्राहरूमा पनि ऊ भेटिन्छ । उसले पिउने पानी न सुरक्षित हुन्छ न त सफा नै । ऊ कि बेरोजगार हुन्छ कि त अर्धरोजगार । उसले काम पायो भने पनि उसलाई कि बढी काम लगाइन्छ कि त मेहनत हेरी कम पारि श्रमिक दिइन्छ । उसले तिरस्कार र बद्नामी सहनुपर्छ । जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त ऊ दरिद्र रहन्छ । धेरैजसो ऊ बाल्यावस्थामै मर्छ । बाँच्यो भने पनि अभाव र विपन्नताले उसलाई मृत्युसम्म छोड्दैन । अन्त्यमा जब उसले संसार छोड्छ, यता बाँच्नेहरूभन्दा मरेर जाने ऊ नै बढी सुखी देखिन्छ ।’
राजा वीरेन्द्रले शक्तिराष्ट्रहरूप्रति कठोर व्यंग्य गर्दै भने, ‘विश्वका गरिबहरूका पक्षमा मैले बोलिरहेको यसै बेला दाल, भातको लागि कराइरहेको एउटा बालकको म आवाज सुन्छु । तर हामी उसलाई दाल, भात अथवा रोटीको बदला बम दिन्छौं । ऊ दयाको भीख माग्दै हामीतिर हेर्छ, तर हामी उसलाई निर्दयताको तिरस्कार दिन्छौं र ऊ शान्तिको कामना गर्छ, हामी युद्धको तयारी गर्छौं ।” राजा वीरेन्द्रका निम्ति प्रशस्त आन्तरिक चुनौती अग्ला र दुर्लङ्घ्य पहाड बनेर उभिएका थिए । अन्तर्र्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाललाई सम्मानपूर्वक उभ्याउने उनको प्रबल चाहना थियो । जहाँ पुगे पनि उनी राष्ट्र र जनताका हितमा आफ्ना विचार प्रस्ट राख्थे । संवादका क्रममा केही पश्चिमा राष्ट्रले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरिएमा प्रशस्त सहायता गर्ने प्रस्ताव पनि राखे तर ‘आफ्ना प्राचीन धर्म-संस्कृति र परम्परा त तपाईंहरूलाई पनि प्रिय लाग्छ नि होइन र ? नेपालको संविधानमा प्राचीन धर्म-संस्कृतिको रक्षा गर्ने प्रावधान के गलत छ र ? ‘ भनेर राजा वीरेन्द्रले जर्मनीका चान्सलर हेल्मुट कोललगायतलाई प्रतिप्रश्न गर्दा ती राजनेता मौन हुन्थे ।
२०४५ सालमा राजाले चीनबाट विमानभेदी हतियारसमेत ल्याएर नेपाली सेनालाई सुदृढ गर्न खोज्दा भारतले १५ महिना नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यसबेला गोरखापत्र दैनिकमा पत्रकारको रूपमा कार्यरत पंक्तिकारलाई राम्ररी सम्झना छ- भारतले नेपाल चीनपरस्त बन्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्दा प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका नेपालका कुनै पनि दल राष्ट्रको पक्षमा बोलेनन् । ऋषिकेश शाहजस्ता मानवअधिकारवादीले भारतीय टेलिभिजनमा बोल्दै नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनी थोरै खाना पनि बाँडेर खान्थे । उसिनेको एउटा अन्डा पनि काटेर साथीहरूलाई बाँड्थे । कसैलाई पक्षपात नहोस् भन्ने उनको सानैदेखि स्वभाव थियो । उनी बालकै भए पनि हाम्रा अभिभावक जस्ता थिए । दरबारमा भएको हत्याकाण्डबारे धेरैले अनावश्यक शंका पनि गरे । वीरेन्द्र शाह र उनका भाइहरूको सुमधुर सम्बन्धबारे थाहा नपाउने केही शंकालुहरूले अनर्गल प्रचार पनि गरे । वीरेन्द्र शाहप्रति उनका भाइहरूको कुनै दुर्भावना थिएन ।’
(युवराज गौतमको लेख अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको)
#राष्ट्र र जनताप्रति